QORSHAYAASHA SIYAASADDA SI JOOJINTA : Kayak Fishing Basics - Go Fishing Forum
QORSHAYAASHA SIYAASADDA SI JOOJINTA
by nacy » Thu Jun 07, 2018 3:05 am
Dumarka qaarkood ayaa si dabiici ah ugu qulqulaya inay ku maydhaan suunka iyagoo la jajaban ama dildilaaca, sababo badan. Waxay ogaadeen in lakabka jilicsan ee dharka jilicsan ee dhinacyadu ay la kulmaan nooca ugu fiican ee miisaanka dhimista miisaanka.
Haddii aad la yaaban tahay sida ay taasi noqon karto, ka feker sidan. Inkastoo xaqiiqda ah in rabshadu ay ku lug leedahay maro badan, dhammaantood waxay isu yimaadaan bartamaha jirka iyagoo abuuraya aragti been ah ee dhexdhexaad ah. Duufaanta daabacan ee quruxda badani waa tusaale fiican. Qaadista, oo ay weheliso guddi caloosha oo muraayad ah oo ku yaal dhinaca hore ee dabaasha ayaa ku qabta gudaha kuna shaqeeyaa sida sixirka si ay u awoodaan inay u dheelitiraan iyo codka.